Göteborg: Haweeney maxkamad loo soo taagay dhac ay u geeysatay waayeelo | Somaliska
Haweeney ka tirsan shaqaalaha u adeegdda howlgaladda ee hemtjänst-tiga ayaa magaaladda Göteborg waxaa loo soo taagay maxkamad, ka dib markii ay dhac u geeysatay labbo waayeeladda howl gabka ah oo ay caawin jirtay.
Haweeneydan oo da’deeda lugu sheegay 35 ayaa ka howl gali jiray degmadda Hisingen ee galbeedka Göteborg, waxaana ay muddo labbo sanno ah xadeeysay hantida waayeeladan oo 99 jiro ah. Haweeneydan ayaa dhacday adduun gaaraya 300.000 (saddex boqol oo kun) oo lacagta karoonka ah.
“Tani waa mid salka ku heeysa dhac culus oo loo geeystay shaqsiyaad aan awood iyo tabar laheyn iyadoo haweeynadani ay adeegsatay saxiixyo been abuur ah” ayuu yiri Per-Erik Rinsell, oo ah madaxa dacwad oogeyaasha gobolka Göteborg.
Madaxii hey’ada saacidayaasha howlgabka ee hemtjänst-tiga oo isna ka hadlayey maxkamada horteeda ayaa ku sifeeyey haweeneydaasi qof fur furan oo dadka caawisa, balse ay jireen tuhun ah xatooyo dadyow la saacidayayey islamarkaasina ay haweeneydani farta lugu fiiqay.Dhinaca kale muddo haatan laga joogo ayaa haweeneydani oo caawin jirtay odey toddobaatan jir ahi ayaa wiil uu dhalay odeygaasi la soo xirriiray xarrunta haweeneydan shaqaaleeysiisay, waxaa uu sheegay in koontada aabihii ee keydka ah uu ka dareemay is dabamareeyn iyo xaalad aan dabiici aheyn taas oo ah in labbo jeer lagala baxay lacag dhan toddobo iyo tobbon kun islamarkaasina loo xawilay koonto kale, falkaana ay ka dambeeysay haweeneydan.
Isbuucyo gudahood ayaa sidaas si la mid ah waxaa ay dhac u geeysatay haweeney 99 jir ah, arrintan ayaa soo baxday ka dib markii qof kale oo isla waayeelada caawiya ay sheegtay in ay dareentay in haweeneyda ay kaalmeeyso koontadeeda ay tahay mid aan wax ku jirin oo xitaa aan awoodin in ay iska bixiso kirada bisha.
Mar baaritaan la sameeyey ayaa haweeneydan haatan ku eedeysan xatooyada ay soo baxeen in lacagahaas ay howlgabka ka dhacday iskaga bixisayboqolaal biilal adduun gaaray 270.00 (Labbo boqol iyo toddobaatan kun). Biilashan ayaa ahaa kuwo ay u shubi jirtay dhamaan shirkadaha kala ah CSN-ta taleefano iyo teleefishino iyadoo xitaa sidoo kale ka bixin jirtay biilasha hooyadeed.
Arrinta kale ee yaabka leh ayaa ah in labaddii waayeel ee ay dhaca u geeysatay aaneey ifka joogin oo ay geeriyoodeen haddii ay maanta maxkamadda la soo kori lahaayeen ama ugu yaraan ka warami lahaayeen sideey wax u dhaceen. Ugu dambeyntiina haweeneydan ayaa iska fogeeysay eedeeymaha loo heeysto, waxaana ay ku dooday in qof dhac u geeystay oo adeegsaday magaceeda iyo aqoonsigeeda taasoo sida muuqata noqotay arrin lugu qoslo.
Ma ahan markii ugu horeeysay ee dhac loo geeysto waayeelada iyo shaqsiyaadka aan lixaadkooda dhameeyn, arrimahan ayaa ah kuwo siyaabo kale duwan u soo laa laabta haba ugu badnaadaan kuwa iyaga saacida shaqsiyaadkan howlgabka ah.